संविधानले खुशी ल्यायो : सिंह |
संविधानले खुशी ल्यायो : सिंह
22 September, 2015 | Krishna Adhikari | 610 Views | comments
२०७२ असौज ३ गते संविधान जारी हुनुका साथै संविधान सभा संसदमा रूपान्तरित भएको छ । त्यसरी औपचारिक रूपमा संविधान सभाको अन्त्य भएको छ । यो धेरै प्रसन्नताको कुरा हो । किनभने त्यसले संविधान बनाउने काम पूरा गरेको छ । संविधान निर्माणपछि संविधान सभाको अन्त हुनु स्वाभाविक थियो । त्यसले आफ्नो मिसन पूरा गरेको थियो । त्यसकारण त्यसको त्यो अन्त्य स्वाभाविक नै हो । तैपनि गत साढे ६ दशकसम्म मेरो संविधान सभासित अत्यन्त घनिष्ट र भावनात्मक सम्बन्ध पनि रहेको छ । इतिहासका बेग्ला–बेग्लै कालखण्डमा मेरो त्यससित सम्बन्ध रहेको छ । त्यसैले त्यसको अन्त्यले कता कता मलाई केही दुःख पनि लागेको छ । गत कालमा कैयौँपल्ट त्यसको अन्त हुने गरेको थियो । कैयौँपल्ट त्यसको हत्या पनि हुने गरेको थियो । त्यसरी अस्वाभाविक प्रकारले त्यसको अन्त्य वा हत्या हुँदा धेरै नै दुःख लाग्थ्यो । तर अहिले स्वभाविक प्रक्रिया अनुसार त्यसको अन्त्य भएको छ । त्यसले आफ्नो मिसन पूरा गरेपछि त्यसको अन्त्य भएको छ, जुन स्वाभाविक छ । त्यसका लागि दुःख नलाग्नु पर्ने हो, तैपनि केही दुःख लागेको छ । तर त्यो दुःखभन्दा बढी संविधान बनेकोमा प्रसन्नता अनुभव भएको छ ।
संविधान सभासितको मेरो सम्बन्ध सर्वप्रथम २००७ सालमा कायम भयो । त्यो बेला म नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता थिएँ । त्यही बेला संविधान सभाको घोषणा भयो । त्यो बेला मैले बुझेको पनि थिइनँ, संविधान सभा भनेको के हो ?पछि राजा त्रिभूवनले त्यसलाई खारेज गराउन षडयन्त्र गर्न थालेपछि बल्ल मैले त्यसको महत्वबारे केही बुझ्न थालेँ । २००९ वा १० सालतिर संविधान सभाको निर्वाचनका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस, राष्ट्रिय काङ्ग्रेस समेतले सत्याग्रह आन्दोलन सुरु गरे । म पनि त्यो आन्दोलनमा सहभागी थिएँ । त्यो आन्दोलनको क्रममा मैले संविधान सभाको महत्व वा त्यसका विरुद्धको राजाको षडयन्त्रबारे केही बुझ्न थालेँ ।
२०१० सालमा काठमाडौँको फोहोरा दरबारमा कम्युनिस्ट पार्टीको द्वितीय महाधिवेशन सम्पन्न भयो । त्यो महाधिवेशनको बढी विवादको विषय गणतन्त्र नै थियो । संविधान सभाको प्रश्नमा आम सहमति थियो । त्यसकारण त्यस विषयमा खास विवाद वा छलफल भएन । तर त्यो बेलासम्म पार्टीभन्दा बाहिर संविधान सभाका विरुद्ध राजा धेरै अघि बढिसकेका थिए । टङ्कप्रसाद आचार्यले संविधान सभाका विरुद्ध राजालाई साथ दिएका थिए भने डा. के.आई. सिंह पनि त्यो षडयन्त्रमा सामेल भए । टङ्कप्रसाद, गङ्गालाल, सुक्रराज समेतका नेता थिए र लामो समयसम्म जेलमा बसेका थिए । त्यसकारण उनीप्रति मेरो मनमा धेरै नै आदरको भावना थियो । तर उनले संविधान सभाको नारा छाडेर राजालाई साथ दिएपछि उनीप्रतिको मेरो आदर पुरै नै समाप्त भएर गयो । त्यो प्रश्नमापछि निर्मल लामासित पनि मेरो विवाद हुने गर्दथ्यो । मैले उनलाई पतित नेताका रूपमा हेर्थें भने लामाजीले उनीप्रति आदर भाव राख्नु हुन्थ्यो । उहाँका प्रकाशित संस्मरणमा टङ्कप्रसादबारे हाम्राबीचमा भएको त्यस प्रकारको विवादको उहाँले उल्लेख गर्नु भएको छ ।
हाइस्कुलमा पढ्दा एक जना शिक्षकले मलाई सोध्नु भएको थियो : “तिम्रो आदर्श नेता को हो ?” मैले जबाफ दिएको थिए ः “वीर के.आई. सिंह” । मेरो त्यो भनाइले के.आई. सिंहप्रतिको अत्यन्त उच्च प्रकारको श्रद्धालाई बताउँथ्यो । उनले पनि राजासित मिलेर संविधान सभालाई रद्दीको टोकरीमा फाल्नु पर्छ भनेपछि मेरो उनीप्रतिको आदर पनि समाप्त भएको थियो ।
म एक पल्ट पाल्पाबाट प्यूठान जाँदै थिए । बाटोमा नेता काशीनाथ गौतमसँग भेट भयो । उहाँले वी.पी. र राजाका बीचमा भएको सम्झौताबारे बताउनु भयो । त्यो सम्झौता अनुसार राजाले सुवर्ण शमशेरको नेतृत्वमा मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने, त्यो मन्त्रिमण्डलको नेतृत्वमा संसदको चुनाव गर्ने र ने.का. ले संविधान सभाको नारालाई छाड्ने सहमति भएको थियो । त्यो बेलासम्म ने.का. ले संविधान सभाबारे अडान लिँदै आएको थियो । तर त्यो सम्झौतापछि ने.का. ले पनि संविधान सभाको अडान छाड्यो । त्यसपछि संविधान सभाको पक्षमा हाम्रो पार्टी मात्र बाँकी रह्यो । २०१४ सालमा सम्पन्न द्वितीय महाधिवेशनमा म केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित भएको थिएँ । त्यो महाधिवेशनमा डा. केशरजङ्ग रायमाझी समेतले संविधान सभाको नारालाई पूरा समर्थन गरेका थिए । त्यसकारण टङ्कप्रसाद, के.आई. सिंह, वि.पी. आदिले संविधान सभाको नारा छाड्दै गए पनि हाम्रो पार्टीले छाड्दैन भन्ने कुरामा मलाई विश्वास थियो ।
द्वितीय महाधिवेशन सम्पन्न भएको केही समयपछि जनकपुरमा पार्टीको केन्द्रीय समितिको अर्जेन्ट बैठक बोलाइएको थियो । म भारतीय रेलबाट जनकपुरतिर जाँदै थिएँ । मैले अर्को दिशाबाट आउने रेलमा केन्द्रीय समितिको बैठकबाट फर्केका साथीहरूलाई देखेँ । मलाई प्यूठानबाट ३ दिनको पैदल बाटो हिडेर बुटवल पुग्नु पर्दथ्यो र त्यहाँबाट गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, रक्सौल भएर जनकपुर जानु पर्दथ्यो । त्यसकारण म तोकिएको दिनभन्दा १ दिनपछि पुगेको थिएँ । त्यसैले म पुग्नुभन्दा पहिले नै बैठक सिद्धिएको थियो र म बैठकमा सामेल हुन पाएको थिइनँ । बैठकमा सामेल हुन नपाएपछि म काठमाडौँ गएको थिएँ । त्यहाँ पुगेपछि जनकपुरको केन्द्रीय समितिको बहुमतले संविधान सभाको नारालाई छाड्ने निर्णय भएको थाहा भयो । त्यो निर्णयले पार्टीमा ठूलो विवाद ल्याएको थियो । त्यसबारे विचार गर्न रौतहटमा पार्टीको प्लेनम बस्यो । त्यो बैठकमा पुष्पलाल, शम्भुराम र म समेतले संविधान सभाको पक्षमा कडा सङ्घर्ष गर्‍यौँ । तर बहुमतले संविधान सभाको नारालाई छाडेर संसदको चुनावमा जाने निर्णय गर्‍यो । त्यो बेलासम्म हामीलाई डा. केशरजङ्ग रायमाझी भित्रभित्रै राजासँग मिलेको कुरा थाहा हुन सकेको थिएन । त्यो कुरा हामीलाई दरभङ्गा प्लेनमको बेलामा मात्र थाहा हुन सकेको थियो ।
रौतहट प्लेनमपछि पनि पुष्पलाल, शम्भुराम र म समेतको अल्पमत पक्षले लगातार संविधान सभाको पक्षमा अडान लिइराख्यौँ । अल्पमतका अन्य साथीहरूमा हिक्मतसिंह भण्डारी र बन्दिपुरका कृष्णलाल पनि हुनु हुन्थ्यो । अन्य एक जना पनि हुनु हुन्थ्यो । अहिले मलाई उहाँको नाम याद भएन ।
संसदको चुनाव सम्पन्न भएपछि केन्द्रीय कमिटीभित्र गणतन्त्र र संविधान सभासम्बन्धी विवादहरू धेरै नै तीव्र बनेर गए । कुनै कुनै बेला महिना÷महिना दिनसम्म केन्द्रीय समितिको बैठक भइरहन्थ्यो । अन्त्यमा केन्द्रीय कमिटीले २०१७ सालको सायद फागुनतिर चितवनमा तृतीय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर त्यही बेलामा पुष १ गतेको काण्ड भयो र तृतीय महाधिवेशन गर्न सक्ने स्थिति रहेन । तर त्यो शाही कदमपछि तुरुन्तै भएको दरभङ्गा प्लेनममा संविधान सभासम्बन्धी विवाद तीव्र रूपमा अगाडि आयो । त्यो बेला नेपाली काङ्ग्रेसले विघटिन संसदको पुनस्र्थापनाका लागि सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेको थियो र दरभङ्गा प्लेनममा पुष्पलाल र शम्भुराम समेतले पनि त्यही नारा अगाडि सार्नु भयो र संविधान सभाको नारा छाड्नु भयो । त्यसपछि संविधान सभाको एजेन्डामा म एक जना मात्र बाँकी रहेँ । सुरुमा केही दिनसम्म पाल्पाका वी.आर. राईले पनि संविधान सभाको नारालाई समर्थन गर्नु भएको थियो ।पछि उहाँले पनि त्यो समर्थन फिर्ता लिनु भयो । त्यसपछि डा. केशरजङ्ग रायमाझी र पुष्पलाल समेतका साथीहरूले संविधान सभाका नाराका पक्षमा म एक्लै भएकाले त्यो नारा फिर्ता लिन धेरै अनुरोध गर्नु भयो । तर मैले आफ्नो अडान कायम राखेँ । तर केन्द्रीय समितिभन्दा बाहिर जिल्लाबाट आएका प्रतिनिधिहरू निर्मल लामा, कृष्णदास, कमल कोइराला, बलराम उपाध्याय, चित्रबहादुर गुरुङ, शक्ति लम्साल आदिले संविधान सभाको नारालाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्नु भयो । त्यसको परिणाम यो भयो कि प्लेनममा संविधान सभाको नाराको पक्षमा २८ वा २९ भोटहरू पर्‍यो भने रायमाझीको प्रस्तावको पक्षमा १७ भोट र पुष्पलाल समेतको प्रस्तावको पक्षमा ८ वा ९ भोट परेका थिए । तर केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले प्लेनमले पारित गरेको बहुमतको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको थियो । त्यसकारण संविधान सभाको पक्षमा आन्दोलन अगाडि बढ्न सकेन ।
दरभङ्गा प्लेनमपछि रायमाझीको राजावादी लाइन खुला रूपले अगाडि आउन थाल्यो । केन्द्रीय कमिटीमा उनको बहुमत थियो । त्यसकारण पार्टीभित्र उनको राजावादी लाइन नियन्त्रण गर्ने कुनै सम्भावना थिएन । त्यसकारण पुष्पलाल, तुल्सिलाल र मैले पार्टीमा विद्रोह गरेर तेस्रो महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्‍यौँ । त्यसका लागि देशव्यापी रूपमा पार्टी कमिटीहरूसँग सम्पर्क गर्ने योजना बन्यो । तेस्रो महाधिवेशनको तयारीको सिलसिलामा प्यूठान र अर्घाखाँची गएर फर्कदा म कपिलवस्तुमा गिरफ्तार भएँ र नौ वर्षभन्दा केही बढी समयसम्म जेलमा नै रहेँ । तेस्रो महाधिवेशनमा बलराम उपाध्याय र रामप्रसाद समेतले संविधान सभाको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु भयो । तर त्यो पारित हुन सकेन ।
म २०२७ सालको चैत्रमा जेलबाट छुटेपछि छरिएका पार्टी समितिहरूलाई एकीकृत गर्न २०२८ मंसिर २० गते केन्द्रीय न्यूक्लसको गठन भयो र २०३१ सालको आषाढमा चौथो महाधिवेशन सम्पन्न भयो । त्यसले निरङ्कुश राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा संविधानको निर्माणको लागि सङ्घर्ष गर्ने प्रस्ताव पारित गर्‍यो । त्यसपछि पार्टी देशव्यापी रूपमा निरङ्कुश राजतन्त्र, पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा सक्रिय भयो । २०४१ सालमा पाँचौँ महाधिवेशन सम्पन्न भयो । त्यसले राजतन्त्र, पञ्चायती तानाशाही व्यवस्था अन्त्य गरेर सत्ता जनतामा हस्तान्तरण गर्न सङ्घर्ष गर्ने तात्कालिक कार्यक्रम बनायो । महाधिवेशनले “राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य तथा सत्ता जनतामा हस्तान्तरण गरेर गणतन्त्र स्थापनाको लागि सङ्घर्ष तेज गर्ने” नारा पास गरेको थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनको निर्माण गरेर अन्य कतिपय वामपन्थी शक्तिहरूसँग मिलेर हामीहरू सङ्घर्षमा सामेल भयौँ । सङ्घर्षको अन्तपछि तुरुन्त नयाँ संविधानको निर्माण गर्ने प्रश्न अगाडि आयो । त्यो अवस्थामा हामीले संविधान सभाको चुनाव भएर नै संविधानको निर्माण हुनु पर्छ भन्ने तात्कालिक कार्यक्रम अगाडि सार्‍यौँ । ने.का. र “वाम” मोर्चामा सामेल भएका सङ्गठनहरूले त्यो नाराको विरोध गरे नै, स्वयं संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनमा पनि त्यसबारे मतभेद पैदा भयो । अन्य सबै पक्षहरूले त्यसको विरोध गरे । त्यही मतभेदका कारणले त्यसको विघटन भयो । हाम्रो पार्टीले एक्लै त्यसका लागि आन्दोलन अगाडि बढायो र त्यो मागमा जोड दिँदै २०४८ सालमा सम्पन्न संसदीय चुनावको बहिष्कार गर्‍यो । अन्य सबै राजनीतिक शक्तिहरूले हाम्रो संविधान सभाको नाराको देशव्यापी रूपमा विरोध गरे । माओवादीले आफ्नो सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गरेपछि पनि संविधान सभाको हाम्रो नारालाई दक्षिणपन्थी संशोधनवादी नारा बताउँदै त्यसका विरुद्ध देशव्यापी रूपमा अभियान चलाए ।
२०५१ सालमा सम्पन्न हाम्रो पार्टीको छैटौँ महाधिवेशनले “राजतन्त्रको अन्त्य भएर सत्ता जनतामा हस्तान्तरण हुनुपर्दछ र संविधान सभाको चुनाव हुनुपर्दछ” भन्ने तात्कालिक कार्यक्रम अगाडि सार्‍यो । हामीले बारम्बार यो कुरामा जोड दिँदै आएका थियौँ कि वैधानिक राजतन्त्र कायम भए पनि सार्वभौम सत्ता राजाका हातमा रहँदासम्म पुनः निरङ्कुश राजतन्त्र कायम हुने सम्भावना रहिरहने छ । ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुश शासन कायम भएपछि अन्य सबै राजनीतिक शक्तिहरू पनि संविधान सभाका लागि सङ्घर्ष गर्ने नीति अपनाए । त्यसका लागि ७ दलीय गठबन्धन बन्यो । त्यो बेलासम्म नेकपा (मसाल) र एकताकेन्द्र मिलेर नेकपा (एकताकेन्द्र–मसाल) बनिसकेको थियो । त्यसमा जनमोर्चा, नेपाल सामेल भएको थियो । प्रतिगमनका विरुद्धको आन्दोलनमा चित्रबहादुर के.सी. को नेतृत्वमा बनेको केन्द्रीय संयुक्त सङ्घर्ष समितिले महेन्द्रनगरबाट अभियान सुरु गरेर २०६२ साल चैत्र २४ गते बुटवलमा त्यसको समापन गरेको थियो । त्यसपछि ७ दलीय गठबन्धनद्वारा देशव्यापी रूपमा अनिश्चित कालीन बन्दको कार्यक्रम राखिएको हुनाले हाम्रो अभियानको कार्यक्रमलाई बुटवलमा नै समापन गर्नु परेको थियो । त्यसपछि हामीहरू पुरै नै सात दलीय गठबन्धनको सङ्घर्षको कार्यक्रममा सामेल भयौँ ।
त्यसपछिको इतिहास आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो । २०६४ मा पहिलो संविधान सभाको चुनाव, त्यसको पहिलो बैठकमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाको निर्णय, संविधानको निर्माण नगरिकन पहिलो संविधान सभाको विघटन, त्यसपछि २०७० सालको मंसिरमा दोस्रो संविधान सभाको चुनाव, २०७२ भाद्र ३० गते संविधान सभाद्वारा संविधान पारित र आश्विन ३ गते औपचारिक रूपमा संविधानको घोषणा तथा संविधान सभाको संसदमा रूपान्तरण तथा औपचारिक रूपमा संविधान सभाको अन्त्य ।
अब संविधान सभाद्वारा संविधान पारित भएको छ । त्यो ऐतिहासिक उपलब्धि हो । तर त्यससँग जोडिएका कतिपय महत्वपूर्ण प्रश्न वा समस्याहरूप्रति हाम्रो ध्यान जानु पर्ने आवश्यकता छ । प्रथमतः अन्तरिम संविधान २००७ ले संविधान सभाको चुनाव घोषणा गरेको थियो र २००९ सालमा नै त्यसको चुनावलाई सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिएको थियो । तर २००७ सालपछि त्यो चुनाव हुनका लागि ६५ वर्ष लामो समय किन लाग्यो ? त्यसका लागि को जिम्मेवार छन् ? हाम्रो पार्टी एक मात्र पार्टी थियो, जसले लगातार र दृढतापूर्वक संविधान सभाको चुनाव वा सत्ता जनतामा हस्तान्तरण वा जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा संविधान सभाको निर्माणको पक्षमा लगातार दृढतापूर्वक सङ्घर्ष गरिरह्यो । अन्य पक्षहरूले पनि त्यसबारे स्पष्ट र दृढ नीति अपनाएको भए संविधानको निर्माणका लागि ६५ वर्ष लामो समय कुर्नु पर्दैनथ्यो ।
द्वितीय, अहिले संविधानको निर्माण भयो । त्यो कुनै क्रान्तिकारी संविधान होइन र बुर्जुवा संविधान नै हो । त्यही पनि बुर्जुवा प्रजातान्त्रिक जुन प्रकारको संविधान बन्नु पर्दथ्यो, त्यस प्रकारको बनेको छैन । प्रथमतः संविधान सभाको संविधान निर्माण गर्ने सार्वभौम अधिकारलाई बारम्बार कुण्ठित वा अतिक्रमण गर्ने काम गरियो । अन्तरिम संविधानमा सङ्घीयतालाई सामेल गरेर त्यसको सीमाभित्र रहेर नै संविधानको निर्माण गर्ने वाध्यात्मक परिस्थितिको सृजना गरियो । संविधानको निर्माणको क्रममा पनि विभिन्न देशी वा विदेशी दबाबमा आएर देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता वा राष्ट्रिय हितहरूमा आँच पुग्ने प्रकारका कैयौँ प्रावधानहरू त्यसमा सामेल गरिएको छ । त्यो अवस्थामा त्यसलाई प्रजातान्त्रिक रूप दिनका लागि अझ लामो सङ्घर्ष गर्नु पर्ने आवश्यकता हुने छ ।
तृतीय, संविधान जारी भइसकेपछि पनि देश कैयौँ प्रकारका अन्तर्विरोध र सङ्कटहरूमा उभिएको छ । राजावादीहरूले राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि प्रयत्न गरिरहेका छन् । धर्मनिरपेक्षतालाई संविधानमा सामेल गरिएको भए पनि स्पष्टीकरणद्वारा सीमित वा कुण्ठित गर्ने काम गरिएको छ । देशलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने दिशामा पनि प्रयत्नहरू जारी छन् । मधेशवादीहरूको देशलाई टुक्राउने प्रकारका पृथकतावादी गतिविधिहरू कायम छन् । पश्चिममा जातीय आधारमा प्रदेशको निर्माण लागि थरुहट आन्दोलन चलिरहेको छ । अहिलेको संविधानमा जातीय आधारमा कुनै प्रदेशको निर्माण नगरिएता पनि थरुहट प्रदेशको निर्माणको लागि दवाव लगातार बढिरहेको छ । देशको कुनै एक स्थानमा जातीय आधारमा प्रदेशको निर्माण गरियो भने त्यसको असर देशव्यापी रूपमा पर्ने छ र अन्यत्र पनि जातीय आधारमा प्रदेशहरूको निर्माणका लागि माग वा आन्दोलनहरू बढ्न थाल्नेछन् । त्यसरी अहिले चलिरहेका मधेशवादी, थरुहट आन्दोलनलाई सही प्रकारले समाधान र नियन्त्रण गरिएन भने त्यसको परिणामस्वरूप देशमा जातीय र क्षेत्रीय विग्रह र राष्ट्रिय विखण्डनको गम्भीर स्थिति उत्पन्न हुने छ । माओवादीहरूले संविधान र देशमा कायम भएको गणतन्त्र समेतलाई असफल पार्न आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । उक्त कारणहरूले गर्दा संविधान बने पनि लोकतन्त्र, गणतन्त्र तथा राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाका समस्याहरू गम्भीर रूपमा हाम्रा अगाडि उभिएका छन् ।
हामीले बारम्बार यो स्पष्ट गर्दै आएका छौँ कि अहिले देशमा जुन प्रकारको संविधान निर्माण भएको छ र गणतन्त्रको स्थापना भएको छ, त्यसद्वारा देशमा वास्तविक अर्थमा पूँजीवादी प्रजातान्त्रिक प्रणाली पनि कायम हुने छैन र जनताका आधारभूत समस्याको समाधान हुने छैन । त्यसका लागि लामो क्रान्तिकारी आन्दोलनमा जानु पर्ने कुरामा हामीले जोड दिन्छौँ । त्यही पनि तात्कालिक रूपमा अहिले बनेको संविधान पनि लामो सङ्घर्षको परिणाम हो । मूल रूपमा त्यसलाई रक्षा गर्नु पर्ने वा त्यसको आधारमा गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्नु पर्ने कार्यलाई गम्भीर रूपमा लिनु पर्ने आवश्यकता छ । अहिले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा पनि जुन गम्भीर प्रकारका खतराहरू देखा परिरहेका छन्, तिनीहरूका विरुद्ध पनि उच्च प्रकारको सतर्कता र ऐक्यवद्धताको आवश्यकता छ । एकातिर, देशभित्रका विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूका ढुलमूल, अवसरवादी र सम्झौतापरस्त नीतिहरू, देशमा बढिरहेका जातिवादी, क्षेत्रीयतावादी (मधेशवादी), राजावादी र वामपन्थी सङ्कीर्णवादी गतिविधिहरू र अर्कातिर, विदेशी हस्तक्षेपकारी र षडयन्त्रहरूका कारणले पनि लोकतन्त्र, गणतन्त्र, राष्ट्रियता समेतका विरुद्ध गम्भीर प्रकारको खतराहरू छन् । संविधानको निर्माणबाट प्रसन्न हुने बेलामा ती सबै खतराहरूलाई हल्का रूपमा लिनु वा तिनीहरूको उपेक्षा गर्नु गम्भीर गल्ती हुने छ ।